Maamulka dukaanka internetka Swiss-apteka.com wuxuu damaanad qaadayaa sirta buuxda ee macluumaadka laga helo dadka isticmaala diiwaanka. Dhammaan qodobbada siyaasadda amniga iyo la shaqeynta macaamiisha waxay ku saleysan yihiin sharciyada jira iyo falalka Ruushka.
Dhammaan macluumaadka aad sheegeysid ee diiwaangelinta waxaa lagu keydin doonaa keydka macluumaadka. Dukaanka internetka Swiss-apteka.com wuxuu damaanad qaadayaa qarsoodi buuxda inta lagu jiro fulinta amarka, iyo sidoo kale xaqiiqda ah in macluumaadka ku saabsan qofka iibsada loo isticmaali doono oo kaliya kaliya fulinta amarka la helay.
Macluumaadkaaga diiwaangelinta waxaa loo baahan yahay oo kaliya madaxa maamuleyaashu inay awoodaan inay kula soo xiriiraan taleefanka, adeegga gaarsiinta wuxuu awood u lahaa in alaabta loo dalbado meel sax ah waqtigeeda.
Intaa waxaa dheer, adigoo diiwaangelinaya, waxaad heli kartaa macluumaad ku saabsan dhammaan wararka dukaankeenna: iibsashada alaabta cusub, iibka, barnaamijyada khaaska ah.
Haddii aad qabto wax dhibaato ah ama su'aalo ku saabsan oggolaanshaha iyo diiwaangelinta dukaanka - u soo qor cinwaanka emailka info@swiss-apteka.com walibana waan ku caawin doonaa!
Wakiilada dukaanka internetka Swiss-apteka.com waligeed kuma weydiin kartid kaar caag ah ama faahfaahin kale oo qarsoodi ah.
1. Qaar ka mid ah walxaha la dhigo bogga waa hantida garashada ee dukaanka online-apteka.com. Isticmaalka walxahan oo kale iyada oo aan oggolaansho laga helin milkiilayaasha goobta ayaa la mamnuucay.
2. Websaytka dukaanka online-apteka.com wuxuu leeyahay xiriiro kuu ogolaanaya inaad tagto goobo kale. Mas'uuliyad kama saarno macluumaadka laga soo daabacay boggaan, waxayna bixiyaan xidhiidhyo iyaga u gaar ah si loo hubiyo in dadka ku soo booqda ee ku soo booqda goobtaada.
Macluumaadka shakhsiga iyo amniga:
1. Dukaanka internetka Swiss-apteka.com wuxuu damaanad qaadayaa in aan wax macluumaad ah laga helin weligiis iyo xaalad kasta oo lagu siiyo dhinacyada saddexaad, marka laga reebo sida looga baahan yahay shuruucda ku haboon ee Ruushka.
2. Xaaladaha qaarkood, dukaanka internetka ee Swiss-apteka.com ayaa ku weydiin kara inaad isdiiwaangeliso oo aad bixiso macluumaad shakhsiyeed. Macluumaadka la bixiyay waxaa loo isticmaalaa oo keliya marka la samaynayo amar ku jira dukaanka internetka ama si aad u siiso marti galiye si aad u hesho macluumaad gaar ah.
3. Macluumaadka shakhsiyeed waa la beddeli karaa, la cusbooneysiin karaa ama la tirtiri karaa wakhti kasta oo ka mid ah qaybta "Shakhsiyaadka Shakhsiga"
4. Si aad ku siiso macluumaadka nooc ka mid ah, dukaanka online-apteka.com ee leh ogolaashahaaga si cad ayaa kuu soo diri kartaa fariimo wargelin ah oo ku saabsan cinwaanka e-mail ee lagu qoray muddada diiwaangelinta. Waqti kasta waxaad ka saari kartaa liiska boostada.
5. Macluumaadka ku yaal boggaani waa mid dabiici ah oo wargelin ah, isbeddel kastana waa la sameyn karaa iyadoon wax wargelin ah ka hor.
Dhammaan arrimaha la xiriira fulinta heerarka amniga, xuquuqda daabacaadda iyo xaalado kale - la xariir maamulka goobta info@swiss-apteka.com